विदेश उड्न ठिक्क परेर विमानस्थल पुगेका डेढ सय यात्रु घर फर्किनु पर्दा…. - Public 24Khabar
Home News विदेश उड्न ठिक्क परेर विमानस्थल पुगेका डेढ सय यात्रु घर फर्किनु पर्दा….
नेपाल वायुसेवा निगमको आरए २२९ र हिमालय एयरलाइन्सको एचएन ५६५ उडानमार्फत दुबई उड्न विमानस्थल पुगेका यात्रु सोमबार त्यसै फर्किए।
विमानस्थलका अधिकारीहरूका अनुसार एयर ट्रान्सपोर्ट अपरेसन दुबई सिभिल एभिएसन अथोरिटीले लागु गरेको नयाँ नियमका कारण कोही पनि यात्रु जान नपाउँदा जहाज रित्तै उडेका थिए।
Previous article१२ वर्षको हुँदा भारतमा बेचिएकी चेली ४४ वर्षको उमेरमा घर आफ्नो घर फर्किन (भिडियो हेर्नुस् )
Next articleआजबाट १००० कित्ता सम्म भर्न मिल्ने आईपीओ खुल्यो, आवेदन आज दिँदा ठिक कि केही दिनपछि ?